Ogaden News Agency (ONA) – Gudiga Qoxootiga Somalida Ogadenya oo la shiray faracyada xeryaha si loo qiimeeyo xaaladda qaxootiga
Gudiga Qoxootiga Somalida Ogadenya oo la shiray faracyada xeryaha si loo qiimeeyo xaaladda qaxootiga
Maanta oo Axad ah taariikhduna ay ku beegnayd 5/1/14 waxaa xerada qoxootiga Dhagaxlay ee deegaanka Dhadhaab lagu qabtay shir muhiim ah oo ay kasoo qaybgaleen mas’uuliyiinta xerada qoxootiga.
Shirkan oo ay siwada jir ah usoo qaban qaabiyeen maamulka faraca MIDNIMO ee faraca Dhagaxlay iyo Gudiga Qoxootiga Somalida Ogadenia ee magacooda loosoo gaabiyo ORCC ayaa waxaa kasoo qayb galay dhamaan hogaamiya yaasha xerada qoxootiga Dhagaxlay oo kala ah Gudoomiyaha, gabadha Gudoomiyaha ah iyo 18an qof oo ah Madaxda Qaybaha. Labaatankan xubnood ee qoxootiga hogaamisa ayaa madasha wada fadhiyay marka laga reebo xubno yar oo cudurdaar soo dhiibtay.
Ugu horayn waxaa shirka furay xoghayaha OYSU Dhagaxlay mudane C/naasir oo shir gudoomiye ahaa wuxuuna kusoo dhaweeyay xubnihii dhankiisa ka socday oo ugu horaynba mas’uuliyiinta shirka fadhiday ka haqabtirey xaalada guud ee wadankii ay kasoo qaxeen ee Ogadenia iyo xaalada ay ku sugan yihiin qoxootiga Somalida Ogadenia ee Dhadhaab. Warbixin guud oo dhinacyo badan taabanaysay kadib ay gudigu soo bandhigeen xaaladaha gaarka ah ee khuseeysa qoxootiga S.Ogadenia waxayna carab baabeen arimo dhowr ah oo loobaahan yahay in ay wax ka qabtaan hogaamiyayaasha qoxootigu iyagoo xusay xuquuqda uu xaqa qoxootinimo siinayo oo ay kamid yihiin hoyga, shaqaalaynta IWM. Sidoo kale waxay soo bandhigeen tirada qoxootiga cusub ee ogadenya kasoo qaxay bilihii la soo dhaafay oo aan wali helin diiwaan galin maadaama ayna wax diiwaan galin ah kajirin guud ahaan xeryaha qoxootiga wakhti xaadirkan.
Waxaa hadalkii lawareegay hogaamiyayaashii xeryaha qoxootiga oo si wayn uga warbixiyay dhamaan qodobadii ay soo jeediyeen gudigii ka socday dhanka Qoxootiga Ogadenia waxayna balan qaadeen in ay waxbadan kaqaban doonaan arimahan laga dhawaajiyay.
Sikasta oo ay ahaataba kulankii maanta ayaa ahaa mid aad umugwaynaa islamarkaana lagagaadhay guul aay u wayn oo usoo hoyatay guud ahaa qoxootiga ree Ogadenia ee Dhadhaab kusugan wuxuuna kusoo gabagaboobay isbarasho balaadhan iyo telphonada oo lakala qorto.